Global Voices teny Malagasy » Ny asa miafina tsy manara-dalàna, antony voalohan’ny fitomboan’ny hosoka amin’ny latsakemboka sôsialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Janoary 2020 16:07 GMT 1	 · Mpanoratra Mathieu Carrere Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Andrefana, Frantsa, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna
Asa miafina tsy manara-dalàna – sary narafitra – sehatra ho an'ny daholobe
Raha eo anelanelan'ny 2 sy 3 lavitrisa euros isantaona ny hosoka amin'ny fandoavana latsakemboka sôsialy, mbola avo folo heny mihoatra lavitra an'izany ny an'ireo mpampiasa. Namoaka tatitra momba ny hosoka amin'ny latsakemboka sôsialy ny Fitsaràna misahana ny fanamarinambola : Fanombanana mankany amin'ny fitomboana izay mety hahatratra ny 20 hatramin'ny 24 lavitrisa euros, araka ny kajy nataony.
Hatramin'ny 2007, nitombo avo roa heny ireny endrika hosoka ireny ary vao mainka miha-sarotra dia sarotra ny mampibaribary azy ho hitan'ny be sy ny maro, hoy ny fitsarana misahana ny fanamarinambola. Avy amin'ny asa miafina tsy manara-dalàna ny ankamaroan'ny hosoka, hoy ilay tatitra isantaona momba ny fitantanambolan'ny Fiahiana sôsialy nivoaka tamin'ny 17 Septambra.
Fatiantoka manodidina ny 20 sy 25 lavitrisa euros
Misintona lakolosy fanairana ny Fitsarana misahana ny fanamarinambola . Taorian'ny niampangàny tsy tapaka ny fandrika ataon'ireo mahazo fiahiana ara-tsôsialy, naverin'ilay sampandraharaha ho amin'ny toerany ny zavatra rehetra, narahan'ny fandalinany isantaona momba ny Fiahiana sôsialy, nivoaka tamin'ny Alarobia 17 Septambra.
Amin'ny ankapobeny, « asa afinanefina, ary manampy an'izay ireo tsy fetezan-javatra niniana natao any anatin'ny kajy momba ny latsakemboka » no mandrafitra io hosoka io, hoy ny Fitsaràna. Tamin'ny 2012, tonga tamin'ny haavony ambony indrindra ireny « tsy fetezan-javatra » ireny, notombanana ho tafakatra ho 20 hatramin'ny 24,9 lavitrisa euros. Tarehimarika ambony lavitra be noho ireo mivezivezy hatrizay ; tamin'ny 2011, notombanan'ny tatitra iray avy amin'ny antenimiera ho 8 hatramin'ny 15 lavitrisa euros, io hosoka amin'ny latsakemboka io – indrindra fa ny asa afinafenina – raha 2 hatramin'ny 3 lavitrisa ho an'ny hosoka amin'ny tolotrasa.
Asa miafina ao Frantsan isaky ny faritra, tao amin'ny L’Acoss – Sehatra ho an'ny daholobe
Iza no manao hosoka ao Frantsa ?  Ireo ao anatin'ny sehatry ny fanorenana sy ny varotra no tena manao azy, tombanana ho 22% sy 12%, arahan'ny sehatry ny fitaterana. Ny mifamadika amin'izay, ireo tahan'ny hosoka any amin'ny indostria sy ny fitantanambola no mety ho ambany indrindra. Ny firoboroboan'ny asa miafina tsy manara-dalàna ao Frantsa dia afaka hazavaina amin'ny alàlan'ny fitomboan'ireo vesatra sy hetra : nampitomboina ny fahasarotan'ny fikarakaràna antontan-taratasim-pitantanana ao Frantsa, ary dia nanosika ny fisian'ny asa afinafenina.
Antony hafa mifanakaiky amin'io, ny fitomboan'ireo mpiasa nafindra toerana . Avy any Pôlônina, Romania; ny fepetra sôsialy nisy tany amin'ny firenena niaviany no itantànana azy ireny – faran'izay mora tokoa – nefa izy ireo ao Frantsa no miasa ary tsy manana asa sahanina akory any amin'ireny firenena ireny ireo mpampiasa azy ireny.
Farany , ny fanararaotana tafahoatra ny sata maha-mpandraharaha miasa tena, izay amadihana ny fifamatorana arak'asa ho lasa fifamatorana ara-barotra, miaraka amin'ny vesatra sôsialy maivana kokoa ho an'ilay mpampiasa.
« Zara raha misy ny fanarenana », « ny famoriana hetra koa mampihomehy »
« Zara raha misy ny fanarenana », « ny famoriana hetra koa mampihomehy » hoy ny lazain'ilay tatitra. « Na teo aza ireo fivoarana tato anatin'ny taona vitsy, tena mbola kely dia kely ny fahitàna ny fahombiazan'ireny fanarenana ireny raha jerena amin'ny habetsahan'ny vola tokony hangonina : latsaky ny 1 lavitrisa euros ny famoriana hetra tamin'ny 2013. Tsy misy afa-tsy 291 tapitrsa euros ny an'ny asa tsy ara-dalàna izay tena mandrafitra ny ankamaroan'ireo hosoka amin'ny fandoavana latsakemboka », hoy ny Fitsaràna misahana ny fanamarinambola niaiky.
« Ilaina apetraka ny fanamafisana ny ady atao hanoherana ny hosoka amin'ny latsakemboka sôsialy », hoy ny hevitry ny Fitsaràna. « Mila mandalo amin'ny fanaovana izay haha-matihanina ireo mpisehatra izany, fanapariahana ny fampiasàna ireo teknika maoderina kokoa, ireo fitaovana hahafahana mihetsika sy fampitomboana ny sazy. »
Araka ireo tarehimarika farany ireo, manakaiky ny 5% amin'ny fidirambolan'ny Fiahiana sôsialy no banga isantaona ao anaty tahirimbola. Lavaka eo amin'ny 13,4 lavitrisa euros eo tamin'ny 2014 no tao amin'ny Fiahiana sôsialy. Ny famahàna ny olan'ny hosoka dieny any am-pamoriana dia ahafahana manentsina avy hatrany io fahabangàna io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/01/01/146365/
 Misintona lakolosy fanairana ny Fitsarana misahana ny fanamarinambola: https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/La-securite-sociale
 Iza no manao hosoka ao Frantsa ?: http://www.liberation.fr/economie/2014/09/16/la-fraude-aux-cotisations-sociales-explose_1101738
 ny fitomboan'ireo mpiasa nafindra toerana: http://www.liberation.fr/politiques/2014/05/11/le-chantier-des-travailleurs-detaches_1015152